Andriano LED Bathroom Mirror
Mitsivalana LED Bathroom Mirror
Mitsangana LED Bathroom Mirror
Fitaratra isaky ny Square Meter Smart Sublimation Wall Cosme ...
LED Backlit Mirror Anti-zavona nanazava mitsangana na ...
Custom Size Clock Digital sy ny Smart Temperatura Disp ...
Aza mikasika Screen Bathroom Mirror nitondra Fahazavana ho Makeup Wi ...
Tsy ara-dalàna, Square / Round / mahitsi- / Oval / Rhomb / Custom endrika
Namboarina (LED hazavana, Anti-zavona, famantaranandro fampisehoana, Temperature miseho)
Namboarina (500x700mm, 800x600mm ...)
SMD LED endasina, Mavo, White
narovany feno perla Styrofoam sy ny volon'ondry
ny fitaratra fahazavana tonga ny mpampiasa tsy misy breakage
1-25 andro taorian'ny petra-bola
LED Light / Anti-zavona / Temperature Display / Clock Display
Yellow / fotsy
Silver nanohana fitaratra, dia afaka manakana ny mainty tsara toerana fa tsy mora ny ho harafesina.
Zavona mahatohitra, miaraka mafana demister pad, alavironareo c sary.
IP44 laharana tantera-drano, azo antoka ho an'ny faritra fidiovana 2 & 3.
Avo mora sensor jiro, swipe fotsiny ny tananao hampiakatra azy eo, isan-karazany mahomby ao anatin'ny 300mm.
Low fahefana malefaka DC famatsiana, mangina mitondra fiara tsy misy tabataba.
Cool mihazakazaka, mahafinaritra vera hikasika.
50.000 ora ny fiainana tombanana.
Mora ny fametrahana, rindrina tovon.
Tsy misy fikojakojana, tena mora ny madio.
Custom misy: Wattages, Lumens, endriny, Dimensions, Switches, sns
Zavatra fanampiny: Time Display, Shaver Socket, Wireless Sound, Tester ny toaka, etc.
LED SMD endasina
2x na 5X, na 7 na 10X na namboarina
Custom 2x 3X 5X 25X 30X nankalaza Makeup Glass amin'ny nitondra Light Cooper Free Bathroom Mirror
Arovana amin'ny alalan'ny feno perla Styrofoam sy ny volon'ondry
anaty boaty, 1pc / Carton
Sample: 1-5 andro
Faobe: 10 ~ 25 andro taorian'ny petra-bola
Tsy nahita tsara izay izay tadiavinareo? Afaka mamorona fomba amam-panao mahafinaritra fitaratra hihaona anaty endrika 'tsy manam-paharoa zavatra ilaina. Azafady hamaritra safidy tsirairay etsy ambany mba ampanjifaina ny filaminana.
Matoky antsika izy ireo:
Q1. Azoko Atao mba ho nitarika santionany mazava bata fitaratra?
A: Eny, mandray santionany isika mba hizaha toetra sy hanamarina tsara. Mifangaro santionany dia azo ekena.
Q2. Ahoana kosa ny amin'ny fe-potoana?
A: 3-5 Mila Sample andro, faobe ny fotoana famokarana mila 2-4 herinandro mba miankina amin'ny habetsahana
Q3. Ve ato aminareo MOQ misy fetra mazava ho an'ny nitarika fandroana mba fitaratra?
A: Low MOQ, 1pc ny santionany fanamarinana tsy ampy
Q4. Ahoana no an-tsambo ny fananana sy ny Mandra-pahoviana no atao mba tonga?
A: Matetika an-tsambo izahay ny DHL, UPS, FedEx na TNT. Mila izany matetika 3-5 andro vao tonga. Fiaramanidina sy ny ranomasina koa ny fandefasana tsy voatery.
Q5. Toy 'zao baiko mazava ho nitarika bata fitaratra?
A: 1. Lazao anay fa fepetra na ny fampiharana.
2.We notsongaina araka ny fepetra takiana na ny soso-kevitra.
3. mpanjifa manamafy ny santionany sy ny petra-bola ho an'ny toerana mba ôfisialy.
4. isika handamina ny famokarana.
Q6. Moa ve OK pirinty ny famantarana ny vokatra?
A: Eny. Mba mampahafantatra antsika ny famokarana ara-dalàna eo anatrehan'ny ka hanamarina ny endrika Voalohany mifototra amin'ny ny santionany.
Q7: hanolotra antoka ve ny vokatra?
A: Eny, dia manolotra ny 2 taona fiantohana ho an'ny vokatra.
Q8: Ahoana no hiatrehana ny diso?
A: 1. Ny vokatra dia vokarina ao amin'ny rafitra fanaraha-maso hentitra kalitao sy ny tahan'ny simba dia ho latsaka
2. nandritra ny vanim-potoana antoka, dia handefa vaovao jiro vaovao ho an'ny kely mba be. Fa
tsininy batch vokatra, isika, dia hanamboatra azy ireo sy resend azy ireo ianao, na dia afaka miresaka momba ny vahaolana aho
ncluding indray antso araka ny tena zava-misy.
Previous: framed bathroom mirror, Touch Screen Bathroom Mirror | jiajie
Backlit Bathroom fitaratra
Bathroom Concave nankalaza Mirror sy Fahazavana
Bathroom nankalaza Hitany Mirror
Bathroom ho Up Cosmetic Mirror
Bathroom Mirror Amin'ny Hitany jiro
Bathroom Mirror sy Fahazavana
Bathroom Mirror Amin'ny Magnifier
Battery Hitany Light Bathroom Mirror
barahina Frame Rose Gold Bathroom Mirror
zavona Free Bathroom Mirror
Frameless Bathroom Hitany Mirror
High Quality Modern Bathroom Hitany Mirror
Hotel fidiovana Mirror
Nitondra Backlit Bathroom Mirror
Kanjo Nahita Bathroom Mirror
Kanjo Nahita nanazava Bathroom Mirror
nanazava Bathroom fitaratra
nankalaza Bathroom Mirror
manodidina Kanjo Nahita Bathroom Mirror
Smart Bathroom fitaratra
Wall niainga Bathroom Mirror
Zhuyuangang 235, Tiantou Village, Yuanzhou Town Boluo County Huizhou City, Guangdong Province, 516100 PR Shina